Hacks nolosha caalamiga ah
1. Qubeyska isbarbardhiga, daawaynta si fiican loo yaqaan oo weli waxtar leh. Ku beddel biyo kulul oo leh biyo qabow: sidan waxaad dib u heli doontaa firfircooni, iyo maqaarkaaga, midab casaan leh oo caafimaad leh. Tan ugu muhiimsan, ha ku badin biyo kulul, ma fududa in la daboolo gubashada.
2. Haddii aadan qubaysan karin, isku day inaad gacmahaaga si beddel ah ugu dhaqdo biyo kulul iyo qabow. Saamaynta dhiirigelinta ah ayaa sidoo kale la dammaanad qaaday.
3. muuqa cusub iyo indhuhu guduudan yihiin isma qabsan karaan. Soo iibso dhibco gaar ah, waxay yareyn doonaan casaanka, waxay kaa dhigi doonaan indhahaaga dhalaalaya, waxaadna u egtahay mid soo kabatay.
4. Isticmaal bacaha shaaha daawo guri ahaan goobada mugdiga ah ee indhaha hoostooda. Ka buuxi biyo kulul, wax yar u qabooji, ka dibna indhahaaga mari 10 daqiiqo.
5. Qaadooyinka waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagula dagaalamo bacaha indhaha hoostooda. Ku dhaaf qaboojiyaha ilaa 10 daqiiqo, ka dibna ku dheji meelaha dhibka leh.
6. Isticmaal xoqo. Waxay meesha ka saari doontaa unugyada maqaarka ee dhintay waxayna siin doontaa wejigaaga muuqaal caafimaad leh. Haddii aad nin tahay, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah tubooyinka gabadhaada ama waxaad ku shubi kartaa biyo karkaraya qaado oo oatmeal ah, u daa 10 daqiiqo, ka dibna ku duug wajigaaga boorashkan. Xoqadda boorashku waa mid adag oo aan waxyeello u geysan raganimadaada.
7. Marso kareem wajigaaga. Fiican, qoyaan, laakiin guud ahaan, ka dib habeen hurdo la'aan, kareem kasta oo loogu talagalay qaybta sare ee jirka ayaa sameyn doonta. Ma sii xumaan doonto.
8. Wejigaaga ku tirtir baraf baraf ah. Qabowgu wuxuu ilaalin doonaa inuu dhiiga ku qulqulo maqaarkaaga wuxuuna u ekaan doonaa mid cusub.
9. Ka saar huurada. Guriga dhexdiisa, kaniiniga kaarboonka ee firfircoon ayaa kaa caawin doona inaad tan sameyso. Dusha burushka oo si fiican u caday ilkahaaga. Si aad meesha uga saarto qaybo ka mid ah dhuxusha madow, dhamaystir nidaamka adoo ku cadaynaya daawada cadayga ee caadiga ah.
10. Raadinta quruxda, ha iloobin neefta cusub. Haddii maalintii hore aad aad uga fogaatay khamriga, waa inaad ka takhalustaa urta qiiqa. Cunto fudud oo borotiin ah ku cun, calalso dhadhanka dabiiciga ah, dhir, ama digirta kafeega.
Hacks nolosha ragga
1. Xir Tani waa caws saddex maalmood ah, qalab aad u qurux badan, iyo calaamad hal maalin ah oo aan xiiranayn habeen hore oo hurdo la'aan ah iyo sida aan hagaagsanayn ee mulkiilaha.
2. Kahor intaadan xiirin, ku dhaq biyo kulul, waxay jilcisaa maqaarka.
3. Haddi aad taageere u tahay mandiil toosan, dhib ma leh in lagu qabto gacmo hurdo la'aan ka dib. Soo saar mashiinka caadiga ah.
4. Ama ha xiirin, laakiin u hagaaji timahaaga si ay ugu ekaadaan barar yar waa qayb ka mid ah muuqaalkaaga qurxoon. Waxay qaadan doontaa gacmo, jel ama dhoobo qaabaynta iyo saddex ilbiriqsi. Waxaad u baahan tahay inaad calaacalahaaga ku subagto alaab oo timahaaga ku tumato. Laakiin sida ugu habboon ee timaha-timaha-timaha loo siman yahay waa in aan la samayn: marka laga soo tago asalkeeda, dhammaan calaamadaha fadhiidnimada waxay noqon doonaan kuwo muuqda.
5. Dhawr jeer qanji dhabannadaada. Dhiiggu wuxuu ku degdegi doonaa maqaarkaaga, waxaadna heli doontaa dhalaal caafimaad leh, sida haddii aad dhawaan ka soo laabatay socod firfircoon, oo aan ka iman xaflad khamri ah.
6. Bushimaha engegan ee jeexjeexan waxaa lagu mariyaa malab ama lipstick nadiif ah 15 daqiiqo. Si kastaba ha ahaatee, lipstick ayaa laga tagi karaa rubuc saac ka dib.
Hacks nolosha dumarka
1. Haddii aanay jirin wakhti aad timaha dhaqdo, oo aad isku qurxinayso, madaxaaga dabaysha cimaamad ka soo qaad macawis ama maro. Qalabkan moodada ah waxa lagu xidhi karaa ilbidhiqsiyo gudahood. Ma qarin doonto oo kaliya timo duug ah, laakiin sidoo kale waxay noqon doontaa faahfaahin xusuus leh oo muuqaalkaaga ah.
2. Hack Life, ee isticmaalka taas oo aan la aqbalin in la qirto: waxaad kaliya dhaqi kartaa bangskaaga.
3. Milkiilayaasha timo gaaban oo aan dhumuc weyn lahayn waxay isticmaali karaan shaambo qallalan. Ku buufi xididada, sug in yar inta qaybaha alaabtu ay nuugaan sebum, ka dibna shanlee budada ka dhalatay. Haddii aad leedahay timo dheer ama aad u dhumuc weyn, waxay u badan tahay in dhaqidda iyo qalajinta ay ka dhaqso badan tahay inaad iska saarto shaambada qallalan.
4. Iftiimiye ayaa kaa caawin doona inuu soo celiyo silbashada dhalaalaysa ee wejiga jeexan. Qaybaha dhalaalaya ayaa ka tarjumaya midabka, abuurista dhalanteedka maqaarka jilicsan. Ku mari qaybaha caanka ah ee wejigaaga ama ku dar aasaaskaaga iftiin buuxa.
5. Manicure-ka qolofta waxaa lagu badbaadin karaa varnish dhalaalaya. Kaliya ku rinji cidiyahaaga dusha sare ee varnish-ka jira. Waad ku mahadsan tahay dhaldhalaalka cilladaha, manicure-ka muuqda ma muuqan doono.
6. Ku rinji bushimahaaga lipstick dhalaalaya. Waxay ka jeedin doontaa dareenka indhaha daalan. Intaa waxaa dheer, bushimaha badanaa waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan xitaa ka dib xafladaha duurjoogta ah, markaa ha ka welwelin inaad xoogga saarto.
7. Ha ilaawin ceebta. U fiirso midabada dabiiciga ah, hawshaadu waa si fudud inaad u soo celiso wejigaaga cusub. Laakiin way fiicantahay in la iloobo contouring: muuqaalka maqaarka, waxay u badan tahay, ka tago wax badan oo la rabo, looma baahna in lagu daro dhibco cusub.
8. Samee fallaadho la'aan indhahaaga hortooda. Gacmaha gariiraya daalka iyo hurdo la'aanta way adagtahay in la sawiro xariiq toosan. Laakiin waxaad ku sawiri kartaa daboolka gudaha ee qalin cad, tani waxay ku dari doontaa muuqaal cusub.
9. Mascara madow ku beddel buluug, waxay muuqaal ahaan iftiimisaa caddaanka indhaha waxayna ka takhalustaa casaanka.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 25 hacks nolosha oo isla markiiba hagaajiya muuqaalkaaga!